Ngaphandle kweFence kunye neQela lobuNkokheli beBolster yeHlabathi kunye noMvuzo oMkhulu uOliver Taprogge | I-NAB bonisa iindaba | I-2020 NAB bonisa iqabane leMedia kunye noMvelisi weNAB Veza UKUPHILA. Iindaba zoSasazo lobuNjineli
Ikhaya » Okufumaneka » Ngaphandle kweFence kunye neQela lobuNkokheli beBolster yeHlabathi kunye noMqeshi oMkhulu u-Oliver Taprogge
Ngaphandle kwenethiwekhi yocingo kunye neWaterBear yamkela uOliver Taprogge kumaqela abo. U-Oliver Taprogge uqeshwe ukuba acime i-Fence njengoMlawuli weNtengiso yeDijithali kunye neWaterBear Network njengeNtloko yoSasazo.
Igqala lomzi mveliso uOliver Taprogge uzisa ngaphezulu kweminyaka engama-20 'kwinqaba iAmsterdam. Phambi kokujoyina iNethiwekhi yeFence kunye neWaterBear, uOliver wayenguMlawuli woSasazo kwi-Insight TV, ebeka iliso kubuhlakani bokuhanjiswa kwehlabathi kunye neengxoxo. Ngaphambi koko, uOliver wasebenzela i-Unity Media njengoMlawuli weMixholo onoxanduva lweeapps, kwimfuno nakwintsebenziswano yomntu wesithathu.
Ngokusekwe kwikomkhulu leFence eAmsterdam, uOliver uya kuba noxanduva lokukhutshelwa kwevidiyo kwividiyo (VOD) kwintengiso kwihlabathi liphela kwaye uzakube esongamela iqhinga lokuhambisa ledijithali leWaterBear kunye nezivumelwano kwihlabathi liphela.
UStefanie Fischer, uMlawuli oPhetheyo weNtengiso, ngaphandle kocingo uthe: “Ndiyavuya ukwamkela uOliver kwiqela lethu. Uzisa ubutyebi bamava axabisekileyo kwaye uya kuba yinto ebalulekileyo kwishishini lethu elikhulayo. Sijonge phambili ekwandiseni ukufikelela kwethu kwidijithali kwihlabathi liphela. ”
UOliver Taprogge uthe: “Kuyandivuyisa ukujoyina amaqela e-Off the Fence kunye ne-WaterBear Network. Amandla ehlabathi edijithali ayanda ngezinga elibonakalayo kwaye ndijonge phambili ekubeni yinxalenye yenethiwekhi ekhulayo ejolise kulwabiwo lwedijithali. ”
Malunga Kucingo olubiyele:
Ngaphandle kocingo yinkampani ekhokelela kwimixholo engeyonyani kwinqanaba lehlabathi kunye nokufikelela, ukuvelisa nokusasaza iinkqubo ezizodwa eziyinyani. Iphethwe ngamashishini e-ZDF ukusukela ngo-2019, kwaye asekwa ngo-1994, i-Off the Fence yiNkampani yomxholo eyi-360. Ukuphuhliswa kwe-OTF, ukuxhasa ngemali, ukuvelisa kunye nokuvelisa iinkqubo ezingafakwanga kwilizwe liphela kuluhlu lweendidi kubandakanya iMbali yezeNdalo, iSayensi, uKhenketho kunye noKhenketho, iNdlela yokuphila, iMbali, aBantu neNkcubeko, uLwaphulo-mthetho kunye namaXwebhu amaNqaku.
Ngolunye ulwazi, nceda u tyelele www.cweoclinici.com okanye nxibelelana noJennifer Kemp -
+ 44 203 457 2978 - [imeyile ikhuselwe].
I-WaterBear yinethiwekhi yokuqala yohlobo lwayo: ividiyo yokusebenzisana yasimahla kunye neqonga ledijithali elinikezelwe ekuxhaseni iiNjongo zoPhuhliso oluZinzileyo ze-UN. Ikwenza oku ngomxholo okhuthazayo, itekhnoloji ehamba phambili eqhuba isenzo, kunye nenethiwekhi yomhlaba wonke yamaqabane. Igunyazisa ngokukodwa umbukeli ukuba athathe amanyathelo kwangoko ukuxhasa ii-NGOs kwihlabathi liphela kwaye babumbe ikamva elingcono lomhlaba wethu oethe-ethe.
Previous: I-Telstra yomeleza ubukho beendaba kwihlabathi liphela ngee-PoPs ezintsha kunye nentsebenziswano
next: I-Whitman ikhanyisa iindawo ezinamavili ashushu nge-BB & S Lighting Innovations